लसुनमा मह मिलाएर खानुको चामत्कारिक फाइदा जानिराखाै - ज्ञानविज्ञान
लसुन र मह (हनी) को बारेमा जानकारी नहुने सायदै होलान् । हरेक दिन हाम्रो भान्सामा लसुन मसलाका रूपमा प्रयोग हुन्छ । लसुन मसलामात्रै नभएर यो भान्साको औषधि पनि हो ।
यसले शरीरका अनेक विकारलाई शुद्धीकरण गरेर अनेक खाले इन्फेक्सन कम गर्नसमेत सहयोग गरिरहेको हुन्छ । लसुनले मानिसको पाचनक्रियालाई समेत फाइदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ ।
दुई, तीनवटा लसुनको पोटी पिसेर पेस्ट बनाउने । त्यसमा ताजा (काँचो) मह मिसाउने । मि श्रणलाई केही बेर राख्ने, यसो गर्दा लसुनमा मह राम्ररी मिसिन्छ । यसरी बनाइएको पेस्ट बिहान खाली पेटमा ७ दिनसम्म सेवन गर्ने ।
लसुन र महको महत्व
लसुनजस्तै मह पनि मानिसका लागि औषधीय गुणले भरिपूर्ण छ । लगातार सात दिनसम्म मह र लसुन सेवन गरेमा स्वास्थ्यका लागि चामत्कारिक फाइदा गर्छ । मह र लसुनबाट बनाइएको ‘पेस्टु सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा लाभ मिल्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझाव छ ।
लसुन र महको मिश्रण सेवन गर्दा शरीरमा गर्मी बढाउँछ । यसले तपाईंलाई रुघाखोकीबाट जोगाउँछ ।
मुटुका लागि फाइदा
लसुन र महको पेस्ट सेवन गर्दा मुटुलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुग्छ । यसले मुटुमा जमेर बसेको विकारलाई बाहिर निकाल्छ । यसले मुटुका धमनी सफा गर्ने हुँदा रक्तसञ्चार राम्रोसँग हुन पाउँछ ।
यसको सेवनले पाचनक्रियालाई बलियो बनाउँछ । मानिसको पाचनप्रणाली सबल भयो भने पेटका कारण सुरु हुने अन्य बिरामी लाग्नबाट जोगाउँछ ।
लसुन र महको पेस्टले शरीरमा जम्मा भएको फोहोर र विकार बाहिर निकाल्न ‘क्लिनरुको काम गर्छ । शरीरको विकार बाहिर निस्किएपछि मानिसलाई स्वस्थ जीवन बिताउन यो लाभकारी मानिएको छ ।
यति तपाईं पटकपटक लाग्ने झाडापखालाबाट पीडित हुनुहुन्छ भने लसुन र महको पेस्ट तपाईंका लागि ‘अमृतु हुनसक्छ । यसको सेवनले पाचनप्रणालीले राम्ररी काम गर्न थाल्छ । यसले तपाईको पेटसम्बन्धी जुनसुकै प्रकारको संक्रमण निको हुनसक्छ ।
घाँटीको इन्फेक्सनमा फाइदा
लसुन र महको पेस्ट घाँटीको इन्फेक्सनमा पनि त्यत्तिकै लाभकारी मानिएको छ । यसको मि श्रणमा एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुण पाइन्छ, जसले घाँटीको खसखस र सुन्निएको अवस्थाबाट आराम दिलाउँछ ।
Topics #मह #लसुन #लसुनमा मह #लसुनमा मह मिलाएर खानुको फाइदा
Don't Miss it दुधमा बेसार मिसाएर खानुका अचुक फाइदा थाहापाई राख्नुहोस !
Up Next फर्सी कत्तिकाे मन पर्छ ? मन नपरेपनि खाने गर्नुहाेस, फाइदा सुनेर अचम्ममा पर्नुहुनेछ
बेलको प्रयोगले सुगर रोगबाट मुक्त हुन सकिन्छ, जान्नुहोस् बेलको अचुक फाइदाबारे
बेललाई सस्कृतमा श्री फल भनिन्छ । यो ६-१० मि. सम्म अग्लो हुने अर्ध-पतझर रुख हो । यसका पातहरूमा एउटै पत्र…
स्वास्थ्य र सुन्दरताका लागी मात्र हैन, मष्तिष्कको कार्यक्षमता बढाउन पनि तोरीको तेल उपयोगी – जान्नुहोस् यसका फाइदाबारे
तोरीको तेल खासगरी भारत, रोम र ग्रिसमा हजारौं वर्षदेखि लोकप्रिय रहँदै आएको छ । सबैभन्दा पहिले यो ३ हजार बीसीमा…
छालामा चमक ल्याउन चाहनुहुन्छ भने यस्ता खानेकुरा खाने गर्नुहोस् – जानकारीका लागी शेयर गर्नुहोला
आजकल मानिसहरु सबैभन्दा पहिले अनुहार नै हेर्ने गर्दछन । किनकि कसैको अनुहार राम्रो छैन भने मान्छेहरु छेउ पनि खोज्दैनन् ।…
काखीको पसिना गन्हाएर तनावमा हुनुन्छ ? काखी गन्हाउने समस्याबाट बच्न अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपायहरु
गर्मीको मौसममा पसिना चुहिएर काखी गनाउन थाल्छ । यस्तो भयो भने कोही पनि हामीनजिक बस्न चाहँदैन । काखीको गन्ध हटाउन…
रुघाखोकी, ज्वरो लगायत विभिन्न रोगहरुको संक्रमणदर उच्च हुन्छ । कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका व्यक्तिहरुमा यस्ता रोगको संक्रमण छिटै हुने गर्छ…
होस गर्नुस् , तपाईंलाई पुरुष ग्रन्थीसम्बन्धी समस्या हुनसक्छ
काठमाडौँ – के तपाईंलाई पिसाब छिटोछिटो लाग्ने, पोल्ने, पिसाब गर्दा धारा छुटने, मसिनो हुने धारा छुट्दा छरिएर जाने, अण्डकोष सुनिने,…
यी ५ राशिहरु ,जो सबैभन्दा बढी बुद्धिमान मानिसको श्रेणीमा पर्दछन्
कन्या राशि आलोचक र विश्लेषक ज्योतिष शास्त्रका अनुसार कन्या राशि हुने मानिसहरूको सबैभन्दा ठूलो विशेषता नै यिनीहरू ज्यादै बुद्धिमानी हुन्छन्…
यी हुन्, स्वस्थ्यमा हानी पुर्‍याउने १० साधारण आनीबानी
· राति अबेरसम्म जागै रहनु पर्याप्त मात्रामा नसुत्नु र रातमा अबेरसम्म जागै रहने गर्नाले डिप्रेसन, मोटोपना, तनाव, एसिडिटी, अपच जस्ता…
जाडोमा छाला कसरी जोगाउन सकिन्छ ? जन्नुहोस
कडा साबुन र बढी गन्ध आउने मोश्चराईजेशन प्रयोग नगर्नुहोस् तपाईँलाई मन पर्ने बढी गन्ध आउने मोश्चराइजरले तपाईँको छालालाई जाडो मौसममा…
संसारभरीका सबै मानिस शाकाहारी भए के होला ?
संसारभरी जून १२ तारिखका दिन विश्व मासु मुक्त दिवस मनाइन्छ । यदि संसारभरीका सबै मानिस अचानक सधैंका लागि शाकाहारीका भए…
11 months ago sam dahal
हेड मसाज गर्दाको फाइदाहरु
विशेषगरी राम्रो तेलको प्रयोगद्वारा जब कपालको मालिस गरिन्छ, त्यसले मस्तिष्कलाई शान्त राख्ने मात्र नभई कपाललाई समेत सुन्दर, लामो तथा बाक्लो…
सही मेकअप गर्ने तरिका, जान्नुहोस
आइस्याडो आफ्नो चिउँडोलाई अगाडि बढाएर माथि गर्नुहोस् । नाकको टुप्पोटितर हेर्नुहोस् । ब्रशको मद्दतले आइस्याडोलाई आँखाको एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म…
मुटुको धमनीको अबरोध हटाउँन यी खानाहरु खानुहोस्
हर्ट ब्लकेजबाट बँच्नका लागि शरीरिक क्रियाकलाप आवश्यक हुन्छ र साथै हाम्रो आहारमा केही विशेष चीज समावेश गर्न पनि आवश्यक हुन्छ…
1 year ago mygyanbigyan
गुगल सम्बन्धि केही रोचक तथ्य यस्ता छन |
गुगल संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कम्पनी हो, जसले ईन्टरनेट सर्च, क्लाउड कम्प्युटिङ र विज्ञापनको क्षेत्रमा अत्याधिक लगानी गरेको…
घर संसार (1)
घरेलु उपचार (25)
संस्कृति परम्परा (11)